Ireo karazam-pitiavana avy amin'Andriamanitra – FJKM Ambavahadimitafo Ireo karazam-pitiavana avy amin'Andriamanitra |
Ireo karazam-pitiavana avy amin'Andriamanitra
Publié le 06 décembre 2008 à 12:12
Ny bokin’i Rota dia maneho amintsika ireo endrika maro samihafa isehoan’ny fitiavana rehefa atao lohalaharana eo amin’ny fiainana Andriamanitra. Voalaza fa taranaka mpihodina tamin’Andriamanitra ny Moabita araka ny Nom.22 sy 23 ary voarara mafy ny fiarahana tamin’izy ireo. I Rota dia vehivavy Moabita. Mahagaga anefa fa nofidian’Andriamanitra manokana izy satria avy aminy no nihavian’ny Mpanjakan’Israely iray dia niteraka an’i Obeda ; Obeda niteraka an’i Jese, ary Jese niteraka an’i Davida.
Tsapan’i Rota fa FITIAVAN’ANDRIAMANITRA no nanomezany azy fianakaviana jiosy na dia mpihodina toy izany aza ny taranaka niaviany, nanaiky ny hanambady jiosy izy ary nanaraka ny fombafomba fanao rehetra tamin’izany. Noporofoin’ireto fianakaviany sy ireo mpiara-monina jiosy taminy ny mahalehibe an’Andriamanitra, ary ny toky avy Aminy.
Raha manadihady ny fiainan’i Rota isika dia ny Fitiavan’Andriamanitra (Agape) no isan’ny fototra niandohan’ny karazam-pitiavana. Vakio ny Rota izay misy toko efatra fa ho hitanao ao ireto : fifankatiavan’ny mpianakavy, ny rafozana sy ny vinanto, ny mpiara-monina, ny mpampiasa sy ny mpiasa, ny lahy sy ny vavy, ny fitiavana hiatrika ny fiainana, ny asa ary ny ara-dalàna.
FIFANKATIAVAN‘NY MPIANAKAVY :
Ankohonana tena mifankatia satria niray hina sy nifanampy ary nifanohana mandritry ny mosary tany amin’ny taniny (1:1-6). Vita ny mosary ary samy maty vady i Naomy rafozany sy Rota mirahavavy vinanto, nefa dia tsy te hifandao izy ireo (1:10)
FIFANKATIAVANA EO AMIN‘NY RAFOZANA SY NY VINANTO :
Modely lehibe ny fifadraisan’ny rafozana sy ny vinanto eto. I Naomy izay efa antitra sy maty vady ary nilaozan-janaka roalahy (maty), tsy namela taranaka, kanefa nihevitra izay nahasoa sy nitsodrano ireto vinanto mba hanohy ny fiainany, hahita izay ho anjarany satria mbola tanora no tsy niteraka (1:8,9).
I Rota izay nahatsapa ny fitahian’Andriamanitra nandritry ny fotoana nifankazarany tamin’ny fianakaviany, ka sahy nanapa-kevitra naneho ny safidiny, nanaraka izay nisy ny rafozany sy ny Andriamanitra izay nivavahany dia ilay MAHERY (1:16,17,22)